ရန်ကုန်မြစ်ရဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်က 茶会（tea ceremony） - JAPO Japanese News
ဟူး 29 Jan 2020, 13:28 ညနေ
ဂျပန် green tea ဖျော်တတ်တဲ့ ဆရာမကို ဂျပန်နိုင်ငံကနေ ဖိတ်လိုက်ပြီး၊ ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ အပျော်စီးသင်္ဘောတစ်ခုပေါ်မှာ 茶会（tea ceremony）ကို ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြစ်ရဲ့ အပျော်စီသင်္ဘောပေါ် ကို စီးဖူးတဲ့လူရှိလာ?
အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ တစ်ခုချင်းစီကို report လုပ်ထားပေးတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေပါ။
နောက်ပြီး အရင်တုန်းက ဒီအကြောင်းအရာပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရေးခဲ့ဖူးပေမဲ့၊ ဒီတစ်ခါမှာတော့ tea ceremony နဲ့ပတ်သက်တာကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်လို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ green tea ဖျော်တဲ့ ယဥ်ကျေးမှုကို စိတ်၀င်းစားမယ်ဆို သေချာပေါက် ဖတ်ကြည့်ပါနော်!!
၁ လပိုင်း ၂၃ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီအချိန်မှာ ဂျပန် tea ceremony ကို အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျင်းပနေကြ ဟိုတယ်လိုနေရာတွေမှာမလုပ်ဘဲ အတွေ့အကြုံအသစ်တွေရအောင်လို့ပါ။
ဂျပန်ရဲ့ Tea ceremony culture ကို အသေးစိတ်သိဖို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံက ဆရာမကိုဖိတ်ပြီး ကျင်းပခဲ့တာပါ။
တကယ်ကို ဂျပန်မှာရောက်ပြီး ပွဲတက်နေရသလိုမျိုး ခံစားမိအောင်၊ စီစဥ်ပေးတဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေကလည်း အားလုံး ကီမိုနို နဲ့ ယူကတတို့ကို ၀တ်ဆင်ပြီးဧည့်ခံကြပါတယ်။
ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးကသံအမတ်တွေနဲ့ အခြားတက်ရောက်သူတွေ စုစုပေါင်း လူအယောက် ၅၀ ရှိပါတယ်။
ပွဲမစခင်မှာလည်း ယူကတ၀တ်ကြည့်ချင်တဲ့ ဆန္ဒရှိသူတွေအတွက်လည်း ယူကတ၀တ်နိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုလည်း ပေးခဲ့ပါတယ်။
ယူကတ၀တ်တဲ့လူတွေကလည်း သင်္ဘောပေါ်မှာ အမြောက်အများရှိတဲ့အတွက် ဒီလက်ဖက်ရည်ဖျော်တဲ့ပွဲဟာ ပိုပြီးတော့စည်ကား သိုက်မြိုက်သွားပါတယ်။
ပွဲစပြီဆိုတာနဲ့၊ အရင်ဆုံးဧည့်သည်တွေကို 茶菓子Chagashi（和菓子）Wagashi ဂျပန်မုန့်လေးကိုပေးပါတယ်။
ဒီ green tea လက်ဖက်ရည်ကိုမသောက်ခင်မှာ အရင်ဦးဆုံး ဒီဂျပန်မုန့်လေးကိုစားရပါတယ်။
လာလို့လဲဆိုတော့抹茶 matcha လို့ခေါ်တဲ့ green teaက အရမ်းခါးလို့၊ အရင်ဆုံးဒီမုန့် ချိုချိုလေးကိုစားခြင်းဖြင့် အခါးဓါတ်ကို လျှော့ချပေးဖို့ပေါ့။
ဒီနေ့မှာတော့ အဲ့ဒီလိုမုန့်မျိုး ၄ မျိုးလောက် ရှိတယ်။ အဲ့အထဲကမှ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ၁ ခုကို ယူပြီးစားဖို့ ချထားပေးပါတယ်။
အဲ့ဒီမုန့်ကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Mie ဆိုတဲ့ ခရိုင်မှာ အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ ဆိုင်ကမုန့်ပါ။
အဲ့ဒီမုန့်တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အရသာနဲ့ ပြုလုပ်ပုံကလည်း မတူပါဘူး။ ဥပမာ လိမ္မော်ရောက်မုန့်လေးဆို “ပထမဦးဆုံး နေထွက်ချိန်” ကိုကိုယ်စားပြုထားတာပေါ့။
နောက်ပြီး အဲ့ဒီလိုမုန့်တွေကို လိုက်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာလည်း ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ပန်းအိုးထိုးမှုကို ပြသခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲ့အတွက် ပန်းကိုလည်း ဂျပန်နိုင်ငံကနေ တကူးတက သယ်လာတာပါတဲ့။
မုန့်နဲ့ပန်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး green tea ထည့်ဖို့ခွက် စတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလည်း ဂျပန်ကနေယူလာတာပေါ့။ တကယ်ကို ပြင်ဆင်ထားတာပဲနော်
လက်ဖက်အရွက်ကို အမှုန့်ဖြစ်သွားအောင်ကျိတ်ပြီး အဲ့လိုအမှုန့်ကို လက်ဖက်ရည်ခွက်ထဲထည့် ပြီးတော့ ပူနေတဲ့ ရေနွေးကိုလည်း အနည်းငယ်ထည့်ပြီး 茶筅（ちゃせん）Chasenn လို့ခေါ်တဲ့ မွှေရတဲ့အရာလေးနဲ့ အမှုန့်ကိုညက်နေအောင် မွှေပေးရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံထဲမှပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ အမြှုံပ်တွေအများကြီးထွက်တဲ့အထိ မဖြစ်မနေ မွှေပေးရပါတယ်။
အမြှုံပ်တွေအများကြီးထွက်လာပြီဆို အရသာကလည်း သောက်လို့ကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပြီး၊ အခါးဓါတ်လျှော့သွားတယ်လို့ ဆရာမကရှင်းပြပေးတယ်.
အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ဆန္ဒရှိသူတွေက ကိုယ်တိုင် green tea ဖျော်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေလည်းပေးခဲ့တယ်။ အစဦးဆုံးမို့လို့ ဆရာမကိုယ်တိုင်က လက်ကိုကိုင်ပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာပါ ရှင်းပြပါတယ်။
“မွှေရတာက ထင်တာထက်တောင်ပိုပြီး မြန်မြန်လုပ်ရတော့ တော်တော်လေးကို ခက်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေရခဲ့ပြီးတော့၊ ကိုယ်တိုင်ဖျော်ပြီးသောက်ရတဲ့အတွက် ပိုပြီးအရသာရှိသလိုပါပဲ” လို့ ပွဲတက်လာသူတစ်ယောက်က ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဒီလောက်လှတဲ့ နေ၀င်ဆည်းဆာကိုလည်း သင်္ဘောပေါ်ကနေ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါပြီ။
Tea ceremony ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Dinner နဲ့ ပွဲကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
ယူကတကို၀တ်ပြီး မုန့်နဲ့ green tea ကိုသောက်ရင်း ဂျပန်စတိုင်းထိုးထားတဲ့ ပန်းအိုးလေးတွေနဲ့၊ ရန်ကုန်မြစ်ကြီးရဲ့ နေ၀င်ဆည်းဆာကို ကြည့်ရတာ ပြောမပြတတ်အောင်ကို အရမ်းလှပါတယ်။
ရန်ကုန်မြစ်ထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ယဥ်ကျေးမှုကို ပြသခွင့်ရတာကလည်း ကြည်နူးစရာတစ်ခုပဲပေါ့။
စာဖတ်သူတို့လည်း ရန်ကုန်မြစ်ကြီးရဲ့ အလှကို သွားပြီးခံစားကြည့်ပါ။
စာဖတ်သူတို့အထဲမှာလည်း Tea ceremony နဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောကျသူတွေ အဲ့ဒီလိုပွဲလေးတွေမှာ ကိုယ်တိုင်သွားပြီး တက်ရောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ရော…?သွားချင်ပါသလား…?